Home Wararka MW Xeef: “Farmaajo dan baa u deyrisay maahee ee haduu awoodi lahaa...
MW Xeef: “Farmaajo dan baa u deyrisay maahee ee haduu awoodi lahaa waaba uu i qaaraji lahaa”
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Axmad Ducaale (Xeef) oo shalay ku soo noqday degaanka Galmudug ayaa xalay kulan u si gaar ah ula qaatay qaar ka mida siyaasiyiinta iyo odoy dhaqameedka Galmudug uga warbixiyay kulankii Garowe iyo waxa laga rajayn karo.
MW Xeef oo lagu yaqaano in uu yahay nin aan ka leexleexan runta ayaa u sheegay odoyaasha dhaqanka in kulankii Garowe ahaa bilaaw fiican laakiin uusan rajo badan ka qabin in caqliga Farmaajo wax iska badaleen.
Waxa uu yiri “ walaahaan ku dhaartee Farmaajo dan baa u deyrisay maahee ee haduu awoodi lahaa waaba uu i qaaraji lahaa”. Waxa uu intaas ku daray “waa uu ku qasbanaa in uu u horfariisto ileeyn meel kale oo u ciirsado ma jirtee”.
Hadalka Madaxweynaha Xeef ayaa u muuqda mid muujinaya in wali shaki xoog leh ku kala dhex jiro dowlad Goboleedyada iyo Dowlada Fedaraalka. Dhanka kale Farmaajo ayaa wali magaalada Caddaado ku masruufo Madaxweynaha maqaarka saarka ah ee Axmad Baasto.
MW Xeef ayaa sidoo kale u sheegay dadkii uu sida gaarka ula kulmay “in ayan wax badan iska badali doonin Farmaajo inta uu qoorta ugu jiro willkaa madax dheere (Xassan Kheyre) ee aad moodo qof waalan oo la yiri gaari kaxee”.
MW Farmaajo ayaa horay u diiday in uu aqoonsado hogaanka MW Xeef laakin markii uu tagay Garowe ay danta ku qasabtay in uu aqoonsado Hogaanka Xeef.